सरकारविरोधी प्रदर्शनमा कसको हात ? - Naya Patrika
सरकारविरोधी प्रदर्शनमा कसको हात ?
| पुष १६, २०७४
सरकारविरोधी प्रदर्शनमा कसको हात ? – देशमा हालैका घटनाका लागि आर्थिक समस्यालाई जिम्मेवार ठहर्‍याइँदै छ, तर यस्तो प्रतीत हुन्छ कि यस विरोध प्रदर्शनका पछाडि केही अरू नै कारण लुकेका छन्
इरानमा सुरु भएको सरकारीविरोधी प्रदर्शन शुक्रबार देशका कैयौँ प्रमुख सहरमा फैलिएको छ । प्रदर्शनको सुरुआत बढ्दो महँगीको विरोधमा भएको थियो । तर, मौलवीहरूको शासनविरोधी आमआवाज पनि छिटै यसमा सामेल भएको छ । राजधानी तेहरानमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका केही मानिसलाई प्रशासनले हिरासतमा पनि लिएको छ ।
इरानमा भड्केको सरकारविरोधी प्रदर्शनलाई लिएर अमेरिकाले भनेको छ कि प्रदर्शनकारीका साथमा जस्तो व्यवहार गरिँदै छ, त्यसलाई सारा संसारले देखिरहेको छ । इरानका कैयौँ सहरमा सरकारविरोधी प्रदर्शन जारी छ ।
ह्वाइटहाउसले आफ्नो एक वक्तव्यमा भनेको छ— इरानी नागरिक भ्रष्ट शासन र आतंकवादलाई प्रश्रय दिने कार्यमा देशको रकम उपयोग हुने कार्यबाट आजित भएका छन् । अमेरिकी गृह मन्त्रालयले इरानमा दर्जनौँ प्रदर्शनकारीमाथि भएको गिरफ्तारीको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । हजारौँ मानिसले इरानको सहर कर्मान्साह, रसत, इसफाहन र कुओममा जारी सरकारविरोधी प्रदर्शनमा भाग लिएको बताइँदै छ ।
प्रदर्शनकारी शुक्रबार इरानको राजधानी सहरसम्म पुगेका थिए । सामाजिक सञ्जालहरूमा पोस्ट गरिएका भिडियोमा निकै ठूलो संख्यामा प्रहरीको उपस्थिति भएको देखिएको छ । यस विरोध प्रदर्शनलाई २००९ मा सुधारको समर्थनमा निकालिएका र्‍यालीभन्दा पनि विशाल भएको बताइँदै छ।
ह्वाइटहाउसकी प्रवक्ता सारा हकमीले आफ्नो ट्विटमा भनेका छन्— इरानी सरकारले नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नु आवश्यक छ । उनीहरूलाई आफ्नो भनाइ राख्ने पूर्ण अधिकार छ । र, यसलाई कुल्चिन मिल्दैन । संसारले सबै कुरा हेरिरहेको छ । अमेरिकी गृह मन्त्रालयले सबै देशहरूसित इरानी प्रदर्शनकारीको समर्थन गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले भनेको छ कि इरानी नागरिकको माग मौलिक अधिकार र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने विषयमा केन्द्रित छन् ।
सबैभन्दा पहिले इरानका विदेशमन्त्री इसाक जहाँगिरीले भनेका छन् कि यस प्रदर्शनका पछाडि सरकारविरोधी मानिसको हात छ । इसाकको यो टिप्पणी यहाँको सरकारी प्रसारक आइआरआइबीको नामबाट सार्वजनिक भएको छ । इरान सरकारले चेतावनी दिएको छ कि यस्तो सरकारविरोधी प्रदर्शनको अनुमति कसैलाई पनि छैन र प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध कडा कारबाही गर्नेछ ।
प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति हसन रुहानीको सरकार अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्यवृद्धिलाई रोक्न असफल भएको आरोप लगाएका छन् । अन्डाको मूल्य एक सातामै लगभग दुईगुना बढेको छ । तर, केही प्रदर्शनकारी यस्ता पनि छन्, जसले सरकारविरोधी राजनीतिक बन्दीको रिहाइको माग गरिरहेका छन् ।
इरानी विदेशमन्त्री इसाकले भनेका छन्— देशमा हालैका घटनाका लागि आर्थिक समस्यालाई जिम्मेवार ठहर्‍याइँदै छ, तर यस्तो प्रतीत हुन्छ कि यस विरोध प्रदर्शनका पछाडि केही अरू नै कारण लुकेका छन् । यी ती मानिस हुन्, जो सरकारलाई क्षति पुर्‍याउन चाहन्छन् ।
यसअघि फार्स समाचार एजेन्सीले बताएको थियो कि प्रदर्शनकारीले कर्मन्साहमा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएका छन् । तेहरानका गभर्नर जनरलले भनेका छन्— प्रदर्शनकारीको यस्ता भिडसित प्रहरीले कडा कारबाही गर्नेछ । मसादका अधिकारीको भनाइ छ कि विरोध प्रदर्शनको आयोजना काउन्टर रिभोलुसनरी समूहले गरेको हो । भिडियोहरूमा देखिन्छ, प्रहरीले भिडलाई तितरबितर पार्न पानीको प्रयोग गरिरहेको छ ।